Sanbalooshe ma qaraxyadii baa galaaftay, Mise waxa uu eeday Weerarkii afka ee uu ku qaaday Sirdoonka reer Galbeedka, maxaase sababay | puntlandi.com
Sunday, October 29th, 2017 | Posted by Al
Sanbalooshe ma qaraxyadii baa galaaftay, Mise waxa uu eeday Weerarkii afka ee uu ku qaaday Sirdoonka reer Galbeedka, maxaase sababay
Agaasimihii hore ee Hayada Nabdsugida Somaaliyeed Mudane Sanbalooshe
Fariinta Sanbalooshe ee New York Times
Taliyaha Nabadsugida Soomaaliya ayaa qoraal uu ku qoray wargayska magaca dheer ee NewYork Time ku sheegay in xaalada sirdoonka Soomaaliya ay tahay mid ba’an. Sanbalooshe ayaa ka warbixiyey xaqiiqda dhabta ah ee uu ku sugan tahay xaalka Sirdoonka Soomaaliya.
Wuxuu sheegay in Ciidanka uu mushaar la’aan yahay, tababar macno leh la siinin, isagoo cadeeyey in aysan sirdoonka reer Galbeed wax Xog ah la wadaagin.
Wuxuu kaloo sheegay in kulamo uu ka dalbaday hay’adda danbi baarista Maraykanka ee FBI ay ka cudur daarteen, CIA na warkeeda iskaba daa.
Maxaa ku Kalifay Sanbalooshe in uu qoraalka sameeyo.
Waxay ahayd dhowr bilood ka hor markii Wasiirka Arrimaha Debeda Soomaaliya uu warqad u qoray Dawlada Maraykanka.
Warqada ayaa lagu sheegay in AMISOM aysan waxba ka qaban karin Alshabaab, loona baahan yahay in Dawlada Maraykanka ay si toos ah u caawiso Dawlada Soomaaliya.
Waxaa kaloo lagu sheegya In Iiraan ay doonayso Yuuraniyamka ku jira Soomaaliya, taasoo khatar ku ah danaha Maraykanka.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa lagu sheegay qoraalka in uu Maraykan yahay.
Yuusuf Garaad ayaa sheegay in qoraalka warqada lagu qasbay, oo ay Madaxweynaha iyo Raysalwasaaraha oo isla jira ku amreen in uu diro, qoraalka oo ay u keeneen isagoo diyaarsan.
Warqada ayaa waxaa soo diyaariyey loobistayaal Maraykan ah oo Madaxweyne Farmaajo ku qanciyey in ay u fure u noqonayso balan laga soo qabto Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump.
Waxa muuqata in warqadii ay shaqayn waysay, loona baahday qoraal kale oo abuuri kara fursad uu Farmaajo kula kulmo Donald Trump.
Taas ayaana keentay in Sanbalooshe lagu amro in qoraalkan qoro, uuna jebiyo baratakoolkii shaqo, kana baxo xayndaabkii sirdoonka, ka dib markii isagoo xilka haya uu cadawga u kashifay sirta Ciidanka, canbaareeyeyna dawlado Saaxib ah.
Madaxweyne Farmaajo oo faafinta qoraalka Sanbaloshe saxiixa ku duugay, ayaa ka dhursugaya loobistayaasha Maraykanka ah in ay casuumaad uga keenaan Madaxweyne Trump. Laakin dadka Siyaasada la socda ayaa u arka tani in ay tahay bilawgii dhamaadkii xukun ka Farmaajo.